कतै तपाईको हाँछ्यु रोक्ने बानी त छैन ? सावधान ! यस्ता घातक स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ - ज्ञानविज्ञान
अहिलेको समयमा अधिकांशलाई सामान्य रुघाखोकी लागेको हुन्छ । रुघाखोकी लागेको बेलामा हाँछ्यु आउनु सामान्य पनि हो । तर के हाँछ्यु रोक्नु स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित छ त ?
अधिकांश चिकित्सकहरु हाँछ्यु आउँदा नरोक्न सल्लाह दिने गर्छन् । हाँछ्यु गर्दा एक प्रकारको आनन्द पनि आउँछ ।
‘म कुनै पनि तरिकाले हाँछ्यु रोक्नको लागि सल्लाह दिन्न, त्यो चाहे नाक बन्द गरेर होस् या जानेरै घाँटी बन्द गरेर नै किन नहोस्’, सेन्ट लुइस युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनका ओटोलेरिङ्गोलोजीका सहायक प्राध्यापक तथा नाक कान घाँटी सर्जन एलान वाइल्डले भने । हाँछ्यु आउनै नदिनु र आइसकेको हाँछ्युलाई रोक्नु फरक कुुरा भएको डा वाइल्ड बताउँछन् ।
‘हाँछ्यु आउला जस्तो भएको बेलामा नाकमा विस्तारै मुसार्ने, नाकबाट बेस्सरी सास फेर्ने, जिब्रोले नाक मुनिको भागमा दबाब दिँदा हाँछ्यु आउँदैन । तर एक पटक हाँछ्यु शुरु भइसकेपछि त्यसलाई रोक्न भन्दा आउन दिनुपर्छ’, वाइल्डले भने ।
त्यसोभए डाक्टरको यस्तो सल्लाह नमान्दा चाहीँ के हुन्छ त ? अधिकांश समयमा केही हुँदैन । तर दुर्भाग्यवश केही मानिसहरुमा भने हाँछ्यु रोक्दा यस्ता अस्वस्थ्य अवस्था देखियोः
– डायफ्राममा चोट
– आँखाको सेतो भागको रक्तकेशिका फुट्न सक्छ, जसले आँखामा रातो रेसा देखिन्छ
– कानको भित्रि भागमा हावाको दबाब पर्न गई असर गर्न सक्छ, साथै कानको सुन्ने शक्ति गुम्न सक्छ
– मस्तिष्कको रक्त नली कमजोर बनाउँछ र रक्तचाप बढ्दा फुट्न पनि सक्छ
‘गम्भीर जोखिम निकै न्युन हुन्छ तर दुर्भाग्यवश जे पनि हुन सक्छ’ वाइल्डले भने । केही मानिसहरु निकै जोडले हाँछ्यु पनि गर्ने गर्छन, जसले फेरी अर्कै किसिमको समस्या निम्त्याउँछ ।
साइनस सर्जरी गरेका मानिसहरुले जोडले हाँछ्यु गर्दा आँखाको वरपर रहेको खाली ठाउँमा हावाको दबाब पर्न गई आँखा सुन्निन सक्छ । त्यस्तै दिमागमा पनि हावाको जोड पर्न गई अत्याधिक टाउको दुख्न सक्नुका साथै स्ट्रोक पनि हुन सक्छ । हाँछ्यु गर्दा एक्कासी घाँटी फैलने भएकाले घाँटीमा चोट पुग्न सक्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार हाँछ्यु गर्नु राम्रो हो, किनकी हाँछ्यु गर्दा नाकमा भएका धुलो तथा अन्य एलर्जेन्सहरु बाहिर निकाल्न मद्यत पुग्छ । तर सबै हाँछ्यु भने नाकसँग मात्रै सम्बन्धी रहेका हुँदैन ।
वाइल्ड भन्छन्, ‘धेरै मानिसहरु एक्कासी चर्को प्रकाशमा निस्किदा हाँछ्यु गर्छन् भने केही व्यक्तिहरु अचम्म तरिकाले सेक्सको बेलामा पनि हाँछ्यु गर्छन् । त्यस्तै केही प्रकारका एनेस्थेटिक्सको सम्पर्कमा आउँदा, धेरै खाना खाएमा अथवा इपिलेप्सी जस्ता न्युरोलोजिकल रोगका कारणले पनि मानिसहरुलाई हाँछ्यु आउँछ ।’
गर्मी तथा वर्षायाममा स्वस्थ रहन के गर्ने ?
गर्मी अनि वर्षायाममा स्वास्थ्य प्रति सचेत भइएन भने विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । मौसम अनुसारको दिनैकी भएन भने वर्षाको समय अलि कष्टकर हुनसक्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्स श्रद्धा पौडेलका अनुसार वर्षायाममा भोक नलाग्ने, शरीर बोझिलो तथा आलस्यमय हुने आदि समस्या हुने गर्दछन् ।
भेलसँगै बगेर आउने पानीको मुहान दूषित हुने, गर्मीमा बढी झिँगा भन्किने र खानेकुरा पनि छिटै बासी हुने हुनाले खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन उनको सुझाव छ ।
यस्ता सडेका खानेकुराबाट भाइरस वा ब्याक्टेरिया आदि उत्पन्न हुन्छन । जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन् । त्यसकारण यस्तो मौसममा खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, कस्तो खाना खादाँ स्वास्थ्यलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकको भनाई छ ।
गर्मी मौसममा स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने मुख्य समस्याहरु यस्ता छन्ः
घामले शरीर पोलेर कालो बनाउने
गर्मी अति नै हुँदा ‘हाइपरथर्मिया’ बिमारी हुनसक्ने
आँखा पाक्ने वा हेर्न कठिनाइ हुने
नाथ्री फुटेर नाकबाट रगत आउने
घाउ खटिरा तथा घमौरा निस्कने
छालालाई तापक्रम सन्तुलित बनाउन समस्या हुँदा निकै रातो हुने
झाडाबान्ता, हैजा आदि समस्या हुने
पाखुरा र खुट्टाका मांसपेशी दुख्ने वा शिथिल हुने
गर्मीयाममा स्वस्थ्य रहन के गर्ने ?
राति सुत्दा लामखुट्टे, उडुस, उपियाँ, भुसुना आदिले टोकेमा निद्रा नपुग्ने हुनसक्छ । यसका साथै मलेरिया, ईन्सेफ्लाईटिस जस्ता रोग पनि लाग्न सक्ने भएकोले यसबाट बच्न झुल लगाएर सुत्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । तर कसैकसैलाई झुल लगाउन अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ ।
त्यसैले झ्यालढोकामा जाली राखेर वा लामखुट्टे आदि तह लगाएर बस्न सकिन्छ । यसका लागि घर वरिपरि हरियाली बनाउनुका साथै पानीका खाल्टा, फोहोर, गाईबस्तुको गोबर र कीरा फट्याङ्ग्रा उत्पन्न हुने स्रोत सफा गरेर चुना छरेमा लामखुट्टेजस्ता किराबाट बच्न सकिन्छ ।
यसका साथै गर्मीयाममा हलुका खुकुलो लुगा लगाउने, घामबाट आँखाको सुरक्षाका लागी सनग्लासको प्रयोग गर्ने, छालाको सुरक्षाको लागी सनइस्क्रिन क्रिमको प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै घाममा छाता ओडेर हिँड्ने, हाते पंखा चलाउने, सकेसम्म पिउने पानी आफैसँग बोकेर हिँड्ने जस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
गर्मी भए पनि बिहान सबेरै उठेर व्यायाम गर्ने, पैदल हिँड््ने जस्ता गतिविधि गरेमा शरीर फुर्तिलो हुन्छ ।
यो मौसममा जीवनशैली व्यवस्थित गर्न सकियो भने युरिक एसिड र कोलेस्टोरल उच्च भएको साथै मधुमेहको बिमारीबाट राहत पाउन सकिन्छ । एकैपटक धेरै नखाने तर थोरैथोरै खाइरहने, पानी प्रशस्त पिउने, बरफयुक्त र गुलियो पेयले छिटो तिर्खा लगाउने हुनाले अति चिसो र अति गुलियो नखानु नै बेस हुन्छ ।
वर्षाको मौसममा खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, यसो गर्दा गर्मीको मौसममा शारीरिक समस्या वा जटिलताबाट राहत मिल्छ ।
गर्मी भनेर गुणस्तरहीन बरफ, दूषित पानी, सडकमा जथाभावी बेचिएका फलफूल आदि खानु बिमारी हुने खतरा बढाउनु हो । चिल्लो, भुटेको वा तारेको, सुख्खा खानेकुरा यो मौसममा र अरुबेला सकेसम्म नखानु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
के कस्ता खाना गर्मीका लागी उपयुक्त ?
खरबुजा, काँक्रो वा खिरा, ‘बेरी’ प्रजातिका फल, मेवा, उखु वा नरिवलको रस, गर्मीका उत्तम फल मानिन्छन । नरिवलको पानीलाई प्राकृतिक इर्नजी ड्रिंकका रूपमा लिइन्छ ।
पोटासियमको मात्रा उच्च भएकाले उच्चरक्तचाप र मुटुका लागि पनि नरिवल–पानी उपयोगी मानिएको छ । नरिवलको पानीमा केरामा भन्दा बढी पोटासियमको मात्रा भएको हुदाँ स्वास्थ्यका लागी लाभदायक मानिन्छ ।
गर्मी याममा नरिवलको पानी पिउनाले डिहाइड्रेसको समस्या नहुने , कलेजो, मिर्गौला पाचनप्रणाली र उच्च रक्तचाप, मधुमेहमा पनि उत्तम मानिन्छ ।
दही, मोही वा लस्सी, ताजा कागतीको रस मिसाएको पानी , बेलको सर्बत आदि पनि उत्तिकै उपयोगी छन् । त्यस्तै टमाटर, प्याज, मूला, काँक्रो, गाजर मिलाइएको सलाद, झोलयुक्त रसदार खानेकुराहरू पनि खाने बानी बसाल्नुपर्छ ।
ताजा पुदिनाको चटनी, सुखा पापड, अदुवा, लसुन, हरियो खुर्सानी ‘गर्मी काट्ने’ राम्रा खाद्यपदार्थ हुन । पानी उमालेर पिउने गर्दा पनि गर्मीयामका ८० प्रतिशत सम्भावित रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
यो मौसममा झाडाबान्ता, आउँ, जन्डिस हेपाटाइटिस, टाइफाइड, जुका, मलेरिया फैलिने हुनाले यी सबै बिमारीको आधारभूत रोकथामका लागि उमालेर सेलाएको पानी अत्यन्त आवश्यक रहने चिकित्सकको सुझाव छ ।
Don't Miss it मानिसको शरीरमा किन उम्रिन्छ काँडा ? यस्तो छ कारण – जान्नुहोस्
Up Next बच्चालाई दिनुहोस् ‘दिनुको आनन्द’को नैतिक शिक्षा र सिकाउँनु यी बानीहरु